Xeebta Venice, CA: Ku dhawaaqida dhaqanka, farshaxanka iyo nolosha. - Hanukeii
Waxaa kugu dhacay mar kasta oo aad aragto taxane ama filim laga diyaariyey Hollywood ama California, sida CSI ama 'Baywatch' waxaa jira muuqaal hore kuu yaqaan maxaa yeelay waxaad aragtay wax ka badan hal mar: Bad leh hirar xoog leh, boosteejo badeed, calanka Mareykanka, dad ordaya, barafka, giraangiraha Ferris ee masaafada fog, iyo wajiyada guryaha oo midabkoodu ku kala duwan yahay turquoise, casaan iyo caddaan. Waxaa laga yaabaa inaan isku mid ka hadlayno kaalinta taas oo soo jiidatay filimada waaweyn iyo soo -saarista madadaalada, iyo sidoo kale fannaaniinta iyo naqshadeeyayaasha oo raadinaya meel ku dhiirrigelisa inay abuuraan, sida kiiska Hanukeii.
Adigoon qaadin meel kale oo aad u leexato iyo sidaad u malayn karto, waxaa jira meel 30 daqiiqo u jirta magaalada Los Angeles oo ay ka buuxaan taariikh, dhaqan, firaaqo, farshaxan iyo dabcan xeebta, waxaan ka hadlaynaa Xeebta Venice.Meeshan oo markii hore ay dhiirrigelisay Venice, Talyaaniga iyo maanta waxay noqotay dhiirrigelintayada abuuritaanka koofiyadahayaga. "Venice Turquoise", laakiin ka hor intaanan sii wadin inaan kuu sheego koofiyadahayaga - kuwaas oo aad u qabow jidka - waxaan kuu sheegi doonnaa xaqiiqooyin xiiso leh, meelo ay tahay inaad aragto haddii aad booqato caasimadda bohemian ee Mareykanka.
Markii sumcadda ay qaadatay xeebta iyo magaalada Santa Monica, xeebta Baasifigga ee Mareykanka shaki la'aan waa meel awood u leh inay martigeliso dhammaan noocyada dhadhanka iyo dhaqamada, laga bilaabo kuwa jecel raaxada, raaxada, xasilloonida, xitaa kuwa aadka u xiisaha badan , oo leh ruux bohemian ah, cayaartoy iyo hirarka hirarka. Xiisaha xeebtaani aad buu u weyn yahay oo waxay noqotay hoyga dadka caanka ah sida Julia Roberts, Nicolas Cage, Arnold Schwarzenegger iyo xitaa naqshadeeyaha caanka ah ee Matxafka Guggenheim ee Bilbao, Frank Gehry.
Laakiin maxay ku saabsan tahay Xeebta Venice ee ka dhigaysa meel sax ah oo sixir ah. Tan awgeed waa inaan dib ugu noqonnaa 1905, markii Abbot Kinney, oo ah xoogaa aragti dheer iyo naqshadeeye himilo leh, uu Venice ku arkay deked ku hareereysan qoyanno. Waxa uu ka soo noqday safarkii uu ku tegay Yurub oo uu aad ula dhacay kanaallada iyo xaqiiqda la yaabka leh ee ah in magaalo lagu dul xardhay badda, wuxuu madaxiisa ku abuuray naqshadda waxa noqon doona farshaxankiisa xiga. Si kastaba ha ahaatee, iyo sida aragtida badan, ku -soo -dejinta nooc ka mid ah dhaqanka dal kale way adkayd waqtigaas. Markii marin loo helo aaggan xeebta Californian ayaa soo hagaagtay iyada oo ay ugu wacan tahay qulqulka kanaallada, dhismaha beerta madadaalada ayaa ka bilaabatay xeebta, iyada oo u rogeysa qoyankii hore meel aag leh rafcaan qoys oo xoog leh fasalka dhexe. California oo sare.
Sheekadu halkaas kuma eka, in kasta oo la isku dayay in dib loo abuuro Venice oo ku taal xeebta Santa Monica, goobtani waxay qaadatay qaabkeeda iyo jiheynteeda. Ilaa maantadan, waxay ilaalisaa qaar ka mid ah kanaalaheedii asalka ahaa, oo ay ku hareereysan yihiin chalets raaxo leh iyo doomaha yaryar ee u adeega dadka deggan inay u guuraan badhtamaha magaalada, ama socod lugeeyaan markay qorraxdu dhacdo. The Venice yar taas oo Abbot u maleynayey waqtigaas inuu sameeyay 360º leexasho annaguna waan kuu sheegi doonnaa arrintaas, maxaa yeelay haddii aad aaddo xeebta Californian, WAA inaad tagtaa Xeebta Venice, loo tixgeliyey xeebta leh jawiga ugu badan Mareykanka.
1. Waxay haystaan ​​mishiin telefishannada ku shaqeeya.
In kasta oo soo jiidashadeeda aysan ahayn kaliya midabka biyaheeda, Xeebta Venice waxay leedahay wax aad jeceshahay marka aad timaaddo. Waxa ugu horreeya ee aad ku ordi doontid waa Abbot Kinney Boulevard, marinka leh tiro dukaanno ah coute haute, Soo jiidashada tuducani waa sida haddii aad ku safartay ilbidhiqsiyo New York. Ama si aad tusaale fiican u noqoto, waa sida haddii aad ku sugan tahay deegaanka xeebta ee Los Angeles, ka gudub geeska oo aad isku aragtid waddada shanaad ee New York, waxaad dareemi kartaa inaad ku dhex safrayso bartamaha Manhattan, laakiin haddii aad wax badan eegto cirifka xeebta qorraxda leh ee Koonfurta California ayaa kuu gacan haadinaysa. Marka la soo koobo, jawiga bohemianku wuxuu ka muuqdaa mid ka mid ah daaqadaha bakhaarradan raaxada leh ee qaadanaya codka hipster.
2. Waa caadi in la arko dadka ka sarreeya dadka ku socda xeebaheeda.
Hadda, haddii aad xoogaa u sii dhaqaaqdo dhinaca xeebta, waxay noqon doontaa mid aad u badan in la helo dhisayaasha jidh -dhiseyaasha, dhab ahaantii, waa mid ka mid ah soojiidashada: jimicsigeeda bannaanka 'Muscle Beach', oo ku habboon jaceylka dhimashada iyo xeebta oo muujinaya muruqyadiisii ​​iyo taan qumman. Xitaa, dadka maxalliga ahi waxay yiraahdaan, kani wuxuu ahaan jiray mid ka mid ah jimicsiyadii uu Arnold Shwarzenegger tagi jiray maalmaha Terminator -ka. Laakiin ma aha oo kaliya jimicsi yar oo ku yaal ciidda oo eegaya xeebta, waxaad kaloo ku raaxeysan kartaa dhinaceeda; garoon kubbadda koleyga, garoomada ciyaarta iyo mid ka mid ah seeraha ugu astaanta iyo taarikhda badan abid, taas oo ah waxa aan ka hadli doono.
3. Mowjadaha qaarkood waxaa laga sameeyaa sibidh.
Qaar baa laga yaabaa inaysan garanayn, laakiin qayb ahaan Skateboarding wuxuu ka kacay California. Haa waad yar tahay geek isboortigaan iyo taariikhdiisa, hubaal waad aragtay filimka Sayidka Dogtown, Hagaag, Xeebta Venice waxay saamayn badan ku yeelatay inay noqoto mid ka mid ah meelaha lagu kulmo kuwa dabaasha ee hirarka ka dhammaaday waxayna bilaabeen inay tijaabiyaan barafka. Xaqiiqdii, waxaa laga yaabaa inaad taqaan magaca Jesse Martínez, mid ka mid ah dhawraya ee Dogtown. Isagoo ka mid ah tirooyinka ugu saameynta badan barafka, wuxuu lahaa hindisahan.
Isaga, markii uu qaangaarnimadiisii ​​ku qaatay Xeebta Venice intii lagu jiray 80 -kii waxay la mid ahayd ku guuleysiga bakhtiyaanasiibka isagoo aad u yar. Jawiga halkaas lagu noolaa wuxuu ahaa mid gaar ah oo aad u qosol badan. Taasi waa sababta uu u go'aansaday 2009 -kii inuu bilaabo dhismaha Venice Beach skatepark, oo maanta qayb ka ah documentary weyn oo la yiraahdo "Made in Venice". Barafkaani wuxuu ku qoran yahay midka ugu qaalisan adduunka.
4. Halka ay dhammaato oo ay ka bilaabato waxay ku xiran tahay aragtida.
Hadda, Dhamaadka raadka? Maxay tani ku saabsan tahay. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay Route 66, kan ka gudba Mareykanka bari ilaa galbeed, xitaa ka sii cad: wuxuu isku xiraa Chicago iyo magaalada Los Angeles. Aynu kuu sheegno in Xeebta Venice ay tahay meeshii wadadani ku dhammaan lahayd.
Maxay wadadani muhiim u ahayd? Kadib niyad jabkii weynaa ee 1928kii iyo mowjad xoog leh oo abaar ah, warshadaha ganacsiga ee Mareykanka waxay raadinayeen meel ay ka soo kabtaan. Ahaanshaha xeebkeeda Atlantikada ayaa ah tan ugu badan ee ay saameysay xaaladda dhaqaale iyo kororka qulqulka socdaalka ee doonayay in uu ka tallaabsado dalka isagoo raadinaya “dhul ballan ah”.
Dhererkeedu waa 3940 km, intii ay socotana xubno badan oo safaro ah uma suurtagelin inay gaaraan meeshii ugu dambaysay, mana aha inay dhacday wax naxdin leh, laakiin waxay heleen hab ay noloshooda uga bilaabaan meelo kala duwan oo jidka ah. Sidaa darteed waxay fursad u siineysaa abuuritaanka hoteello, dukaamo, makhaayado iyo saldhigyo gaas. Dhibcaha ayaa aad u qurux badan oo waxay ka dhigaan wadadan wax astaan ​​u ah.
Shaki la'aan, wadadani waa mid heer sare ah, oo mudan filim qibrad leh, iyo sidoo kale, tusaale ahaan, Thelma & Louise, laba baxsad ah oo ku farxa inaan dalka uga gudubno qaab cajiib ah oo xiran nooca muraayadaha indhaha isha bisadda sida Laguna Madow, de Hanukeii.
Markaa haddii aad booqanayso Xeebta Venice waxaad ka heli doontaa ogeysiiska dhammaadka Jidka 66, waxaadna ogaan doontaa inay tahay goob ay ku kulmaan dadka socotada ah, kuwa u hibeeya, iyo sidoo kale waqtiyadan sidoo kale mid ama saamayn kale, oo aan ka tagin qarashka daqiiqaddan iyada oo aan sawir laga qaadin, sababtoo ah shaki la’aan, waa meel leh taariikh badan.
5. Fanku waa farshaxanka aawadiis.
Haddii wax ka soo muuqda Xeebta Venice ay tahay turquoise, dhab ahaantii, qayb weyn oo ka mid ah wejiyadeeda ayaa leh midabkan, waxay u eg tahay in qof kasta oo u qaabeeyey uu ku dhiirrigeliyay isbarbardhigga midabka cas ee qorrax -dhaca qorraxda ku siinayo guryaha hortooda . Sidaa darteed, haddii aad tahay farshaxan -yaqaan waxaad ku hallayn doontaa meeshan. Haddii aad go'aansato inaad xoogaa hoos u gasho xaafadda bohemianka iyo dhaqanka, waxaad ka heli doontaa dukaamo badan, oo dhammaantood aad u midabeysan. Iyaga dhexdooda waxaad ka heli doontaa dukaamo gacan labaad ah, dukaamo duug ah, maqaayado cunto caafimaad leh, fannaaniin reer magaal ah, bandhigyo nool. Dhinac kasta oo meeshan ka mid ah waxay yeelan doontaa wax ay kuu sheegto, waxaan kuu xaqiijineynaa inaysan jiri doonin meel caajis ah, maxaa yeelay sidaan sheegnay, waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah xeebaha ugu cimilada badan adduunka.
Rip Cronk oo ah muraayada ayaa tan u abuuray Venice yar muraayad cajiib ah oo uu dhiirrigeliyay adriatic -ka oo loo qaaday xagga pacific. Waxaad ku socon doontaa Botticelli '' Dhalashada Venus '', oo aad u casri ah, oo fuushan laba kabood oo ka soo horjeeda biyaha cad ee Venice Beach. Laakiin sidee bay taasi suurtogal u tahay? Cronk wuu ogaa in tani ay dhalin doonto buuq, laakiin tani waa magaalo Mareykan ah oo qaadatay hawo Yurub ah iyada oo aan iloobin waxyaabaha daruuriga u ah nolosha marka aad qiimeyso farshaxanka. Marka laga soo tago sida cajiibka leh ee loo arko Venuskan casriga ah, sidoo kale waa midabka turquoise ee muraayadda, oo sidaan sheegnay aad ku xasuusato dhammaan waddooyinka magaalada.
Sababtaas awgeed, markii aan booqanay meeshan, waxaan u malaynay sida ay u qurux badnaan lahayd in la helo koofiyad iftiimisa nolosha lafteeda, laakiin sidoo kale nagu dhiirrigelisa inaan abuurno, inaan nolosha ku bixinno farshaxanka, in mar kasta oo aad aragto aad u malaynayso inay noloshu tahay fudud, aan dhib lahayn, noloshu waa fanka. Iyo in midabkani yahay waxa ugu horreeya ee aad ka fikirto wuxuu ahaa, Xeebta Venice, magaalada dhaqanka, farshaxanka iyo madadaalada.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay soo koobitaankeena yar ee geeskan sixirka ah ee xeebta Californian, iyo marka xigta ee aad ka fikirto inaad dhex gasho waalida ay magaalada Los Angeles noqon karto, xusuusnow in 30 daqiiqo ka fog tahay baxsashadan yar ee kuwa jecel #barefootlife.